गाली गलौज मात्रै मतदाता आकर्षणको चाबी होइन
अहिले चुनावको माहौल छ । यत्रतत्र चुनावी सरगर्मी नै बढिरहेको छ । अभैm केही हप्तासम्म चुनावभन्दा बढी चर्चा कुनै पनि कुराको हुनेवाला छैन । दलहरू, नेताहरू, उम्मेदवारहरू, कार्यकर्ताहरू सबै चुनावी दौडाहामा ब्यस्त छन् । आफ्नो दललाई, आफ्नो दलको नेतालाई, आपूmलाई र आफ्ना बरिष्टहरूलाई भोट हाल्न मतदातासमक्ष बिनय गर्दै हिँडिरहेका छन्, सबै ।
चुनावमा भोट माग्न मतदातासमक्ष अनुनय बिनय गर्नु स्वाभाविक हो । आफ्नो दल, आफ्नो नेता र आपूmले यसअघि गरेका सकारात्मक विकास निर्माण, राष्ट्र निर्माण र आफ्नो क्षेत्र निर्माणका सत्य कुराहरू तथ्यसङ्गत रूपमा मतदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गरेर भोट माग्नु दल, नेता र उम्मेदवारहरूको कर्तब्य पनि हो । त्यति मात्र होइन, आफ्नो दलको, नेताको र आफ्नो हैसियतअनुसार आगामी दिनमा आपूm वा आफ्नो दलले जितेको खण्डमा यतिसम्म काम गर्न सक्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु पनि राम्रो पक्ष हो । यही कुराले मतदाताको विश्वास जित्न र भोट पाउन सहयोग पनि पुग्दछ ।
तर, अहिले दल र उम्मेदवारहरूले त्यसैगरी मत मागिरहेका छन् त मतदाताहरूसँग ? भत्रे प्रश्न उठ्न थालेको छ । इलाममा भएका प्रतिनिधी र प्रदेश सभाका गरि विभित्र दलका ५१ जना उम्मेदवार सबैले आपूmले गरेका सकारात्मक काम र आफ्नो हैसियतअनुसारको गर्नसक्ने कामकै बारेमा मात्रै चर्चा गरेर मत मागिरहेका छन् त ?
बजारमा चलेका हल्ला, उम्मेदवारका कुरा र सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारहरूले यसलाई गलत ठहर्याउँदै गएका छन् । आपूmले गरेका र आपूmले गर्नसक्ने कामका कुरा गरेर मतदातालाई विश्वास जित्न खोज्ने कुरा त परै छाडौँ, यसअघि आफ्नो क्षेत्रमा भएका सबै काम आपैmँले गरेको, यसअघि जितेर ठूलो भएका मान्छेले केही पनि नगरेको, अब पनि आपूm बाहेकका उम्मेदवारले चाहिँ केही गर्न नसक्ने, आपूmमात्रै सबैथोक गर्न सक्ने, आपूmले जितेको खण्डमा सबैथोक नै गरिदिने जस्ता हावादारी भाषण, गफ, आरोप र प्रत्यारोप गरेर मतदातालाई ढाँट्ने काम भइरहेको देखिन्छ ।
आपूmभन्दा बाहेकका दललाई भए नभएको आरोप लगाउने, आपूmभन्दा बाहेकका उम्मेदवारलाई भए नभएको गाली गरेर केही नगरेको र गर्न नसक्ने भनी होच्याउने अनि आपूmबाहेक यहाँ गर्ने कोही पनि छैन भनेर हाँक दिने उम्मेदवारलाई पनि मतदाताले त चिनेका होलान् नि । यसअघिको कृयाकलाप र गतिविधी अनि अब गर्न सक्ने क्षमता र हैसियत सबैलाई नभएपनि केही सचेत मतदाताले त बुझेकै हुन्छन् । उनीहरूले अरू मतदातालाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रभाव पार्ने हैसियत पनि राख्छन् । भीडभाडमा ठूला डाँका गरेर ढाँट कुरा गर्दैमा सबै मतदाता आफ्नो पक्षमा हुन्छन् भत्रे द्धृष्टता गर्दैमा मतदाताको विश्वास जित्न सकिँदैन ।
बिहीबार मात्रै देउमाई नगरपालिकामा भएको एउटा दलको सभामा वक्ता नेता तथा उम्मेदवारहरूले यस्तै द्धृष्टता प्रस्तुत गरे । उनीहरूले दिएका अभिब्यक्तिको सच्चाइ बाहिर आउने हो भने उनीहरूले मतदातालाई दिन खोजेको आशयको ठिक विपरित हुन्छ । त्यसैले अरुलाई गाली गर्नेभन्दा आपूmले सत्य कुराले मतदाताको विश्वास जित्ने गरौँ ।